Agaasinka Isgaarsiinta si loo qoro Kaaliyaha Khaaska ah ee Isgaarsiinta | RayHaber | raillynews
HomeGUUDShaqooyinkaAgaasinka Isgaarsiinta si loo qoro Kaaliyaha Khabiirka Isgaarsiinta
Agaasinka Isgaarsiinta ayaa shaqaaleysiin doonta 30 khabiiro ku taqasusay isgaarsiinta oo hoos imaaneysa cinwaanka Kaaliyaha Khaaska ah Isgaarsiinta.
(1) Tirada ugu badan ee shaqaalaha ee loo magacaabi karo Kaaliyaha Isgaarsiinta Kaaliyaha waa 30 (soddon). Musharixiinta imtixaanka gelitaanka waxaa loo xilsaari doonaa shaqaalaha shahaadada 8aad iyo 9aad ee fasalka GPA.
(2) Dhammaan heerarka imtixaanka waxaa lagu qaban doonaa Ankara.
(3) Xeerarka aan lagu soo darin ogeysiiskan la xiriira imtixaanka gelitaanka ayaa ku jira “Xeerka Isgaarsiinta Khibradda Isgaarsiinta yayımlan oo lagu soo daabacay Rasmiga Gazette ee taariikhdu ahayd 27/11/2018 oo tirsigiisu ahaa 30608. Bogga rasmiga ah ee Xeerka Nidaamka Madaxweynaha (http://www.iletisim.qov.tr) Waa suurtagal in la galo iyada oo loo marayo.
(1) Si loo dalbado imtixaanka;
a) Inuu fuliyo shuruudaha guud ee lagu sheegay Qodobka 657aad ee Sharciga Shaqaalaha Rayidka ah ee Lambarka 48,
t) In uusan gaarin da'da 01 sano ilaa 01/2020/35,
c) Ugu yaraan afar sano oo ah shahaadada koowaad ee jaamacadda
- Kulliyadaha sharciga, cilmiga siyaasada, sayniska dhaqaalaha iyo maamulka, ganacsiga iyo dhaqaalaha (10 qof)
- Awoodaha Isgaarsiinta (10 qof)
- In laga qalinjabiyo kulliyadaha injineernimada (kombiyuutarka, softiweerka, elektiroonigga, korontada iyo elektiroonigga, waaxaha elektaroonigga ah iyo isgaarsiinta - 5 qof) ama goleyaasha tacliinta sare oo u qalmitaankooda ay aqbaleen Golaha Tacliinta Sare,
- Cilmu-nafsiga, cilmu-nafsiga, cilmiga bulshada, cilmiga cilmiga bulshada, cilmiga dhaqanka, cilmiga bulshada iyo qeybaha cilmiga bulshada ee kulliyadaha xiisaha - 5 qof ama u dhigma
Ka qalin-jabiyey machadyada tacliinta sare oo ay aqbaleen Golaha Tacliinta Sare,
(2) Dhammaan codsadayaasha fuliya shuruudaha codsigaba waxaa lagu casuumi doonaa imtixaanka “horay u-qalinjebinta tartanka” imtixaanka.
(3) Haddii aysan jirin arji ku filan oo ka mid ah qeybaha la xiriira, soo iibsiga waxaa laga sameyn karaa qeybaha kale.
(4) Liiska murashaxiinta u qalma inay galaan imtixaanka waxaa lagu shaacin doonaa mareegtada rasmiga ah ee Madaxtooyada (www.iletisim.aov.tr).
(5) Ku dhawaaqida ku saabsan murashaxiinta awoodi doona inay galaan imtixaanka sidoo kale waxaa ku jira macluumaadka barnaamijka imtixaanka iyo cinwaannada iyo qodobada kale ee imtixaanka lagu qaban doono.
HABKA CODSIGA, WAAJIBAADKA, DIIWAANGALYADA LOO BAAHAN YAHAY IN ARJIGA laga codsado
(1) Codsiga baaritaanka 13 - 31 Janaayo 2020 Websaydhka Adeegyada Imtixaamka Jaamacadda Anadolu (oo u dhexeeyahttps://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr).
(2) Ujrada arjiga imtixaanka waxaa lagu bixin doonaa kaarka amaahda / deynta tallaabada ugu dambeysa ee nidaamka arjiga. Ujrada dalabka imtixaanka 90 (sagaashan) TL.
(3) Codsiyada murashaxiinta aan dhammaystirin tillaabooyinka codsashada imtixaanka waxaa loo qaddarin doonaa inay yihiin wax aan ansax ahayn. Codsadeyaasha aan dhigin khidmada imtixaanka inkasta oo ay codsadeen imtixaanka waxaa loo qaddarin doonaa inay yihiin wax aan waxtar lahayn oo “Bayaan dukumiinti ah galitaanka imtixaanka iç lama bixin doono musharraxiintaan.
(4) Sawir baasaboor oo la qaaday 6dii (lixdii) bilood ee la soo dhaafay waa in lagu dhejiyaa nidaamka. Sawirka su'aasha waa in laga soo qaado hore iyo wajiga furan si qofka musharraxiinta ah si fudud loogu garto. Ma jiri doono wax isbadal ah oo ku saabsan astaamaha muuqaalka sida timaha, gadhka iyo sameynta sawirka oo door muhiim ah ka ciyaari doona xaqiijinta maalinta imtixaanka. Waa in maskaxda lagu hayaa in shaqaalaha imtixaanku aysan qaadan karin imtixaanka ama imtixaanka waxaa loo tixgelin karaa inuu yahay mid aan shaqeynaynin haddii murashaxu uu dhib ku qabo inuu isagu isku muujiyo sawirkiisa.
(5) Murashaxiinta leh naafonimada joogtada ah ama ku-meelgaarka ah ama dhibaatooyinka caafimaad waxay heli karaan taageero akhristaha / sumadeeyaha, qolka baaritaanka gaarka ah, iyagoo adeegsanaya qalab / qalab gaar ah ka dib markay buuxiyaan codsiyada imtixaanka. Si ay u soo gudbiyaan codsiyadooda, waxay buuxin doonaan Foomka Macluumaadka Xaaladda Caafimaadka / Naafanimada (lifaaqa-1) oo waxay heli doonaan nuqul la ansaxiyay ee warbixinta caafimaad (oo si cad u muujinaya caqabadda / xaaladda caafimaad ee murashaxa, qalabka / qalabka gaarka ah ee ay tahay inuu musharraxu adeegsado) oo ay qoraan waa inay u soo gudbiyaan codsigooda cinwaanka ku xusan foomka suaal la weydiiyay mudada codsiga. Dukumiinti kasta oo aan ku imaan cinwaanka lagu cayimay waqtiga sabab kasta looma tixgelin doono. Musharixiinta waxaa loo qaadayaa sida ku habboon natiijada qiimeynta ay sameeyeen mas'uuliyiinta.
(6) Waa in la xasuusnaadaa in codsaduhu mas'uul ka yahay saxnaanta macluumaadka arjiga iyo ku habboonaanta sawirrada, iyo wixii khaladaad ah ama ka-tagitaan ah ee soo bixi kara markii la oggolaado codsiga kadib. Markii muddada codsigu dhammaado, murashaxu awood uma yeelan doono inuu wax isbeddel ah ku sameeyo macluumaadka lagu dhawaaqay inta lagu jiray arjiga imtixaanka (doorashada luuqadda qalaad, iwm).
(1) Imtixaanka; doorashada hore (xulasho badan), qoritaanka macluumaadka duurka iyo hadalka.
(2) Imtixaanka isudiyaarinta
- Dooro badan oo ayaa dabooli doona mowduucyada soo socda.
Awooda Guud (30 su'aalood)
Dhaqanka guud (40 su'aalood)
- Taariikhda, juqraafiga, fikradaha aasaasiga ah ee sharciga, ururada caalamiga ah, Turkey iyo arrimaha guud ee dhaqanka iyo dhaqan-dhaqaale ee la xiriira dunida hadda (15 su'aalaha)
- Sharci dejin (10 su'aalood)
. Xuquuqda aasaasiga ah iyo xorriyadda
. 657 Sharciga Shaqaalaha Rayidka ah
. Xeerka Isgaarsiinta Madaxweynaha ee Xeerka Lambar 14
- Fikradaha Isgaarsiinta (10 su'aalood)
- Horudhaca cilmiga bulshada, nolosha siyaasadeed ee turkiga (5 su'aalood)
Luuqada qalaad (30 su'aalood)
- [Dhibcaha = (Number Saxda / Tirada Su'aalaha) x 100] qaaciddada ayaa loo adeegsan doonaa xisaabinta dhibcaha imtixaanka. Qiimaynta ayaa laga samayn doonaa 100 (boqol) qodob, iyadoo la tixgalinayo kaliya jawaabaha saxda ah, iyo jawaabaha qaldan wax saamayn ah kuma yeelan doonaan natiijada. Dhacdada su'aasha (yaasha) la baajiyo inta lagu gudajiro qiimaynta, su'aashan (yaasha) waxaa loo arkaa inay sax yihiin oo lagu dari doonaa qiimeynta.
- Musharixiintu waxay soo gudbin karaan diidmo laxiriirta su'aalaha imtixaanka iyo arjiga imtixaanka laga bilaabo taariikhda imtixaanka. 3 (saddex) maalmood oo shaqo iyo Foomka Rafcaanka Imtixaanka, kaas oo laga helo khadka tooska ah ee shabakadda Adeegyada Imtixaanka. Si diidmadu u ansax u noqoto, codsadayaashu waa inay soo gudbiyaan kaarka amaahda / deynta iyadoo loo marayo nidaamka ku habboon nooc kasta oo racfaan ah. $ 10 (toban) lacag bixinta, buuxi oo sixi foomka su'aasha ku jirta. Diidmada lagu sameeyo wixii ka baxsan taariikhaha la xiriira ama marinnada kale lama tixgelin doono.
- Kadib marka natiijooyinka imtixaanka la shaaciyo, codsadayaashu waxay soo gudbin doonaan diidmadooda ku saabsan natiijooyinka 3 (saddex) ganacsiga maalin, iyada oo loo marayo Foomka Rafcaanka Imtixaanka, kaas oo laga helo khadka tooska ah ee shabakadda Adeegyada Imtixaanka. Si diidmadu u ansax u noqoto, codsadayaashu waa inay ku dalbadaan kaarka amaahda / deynta iyadoo loo maro nidaamka ku habboon. 10 (toban) TL bixinta ayaa loo baahan yahay si loo buuxiyo loona xaqiijiyo foomka si buuxda oo sax ah. Diidmada lagu sameeyo wixii ka baxsan taariikhaha la xiriira ama marinnada kale lama tixgelin doono.
(3) Imtixaanka Aqoonta ee Goobta: Murashaxiinta ka gudba imtixaanka isudiyaarinta hore (kuwa ka dhaliya 70 ama in kabadan, 20 jeer tirada shaqaalaha loo magacaabayo ogeysiiska, waxaa laga soo saari doonaa natiijada ugu sareysa (oo ay kujiraan kuwa leh isla dhibco isla murashaxii ugu dambeeyay) waxayna kaqeybqaadan doonaan “Imtixaanka Qoraalka Aqoonta ee Qoraalka .. Baaxadda iyo nooca imtixaanka koox kasta waxaa lagu shaacin doonaa mareegtada rasmiga ah kadib imtixaanka u qalmidda.
(4) Afka: Murashaxiinta ku guuleysta imtixaanka aqoonta gudaha kooxdooda, 4 (afar) jeer tirada musharixiinta waxay xaq u yeelan doonaan inay ku aflaxaan heerka imtixaanka afka ah si ay ugu guuleystaan.
(5) Imtixaanka afka ah kadib imtixaanka qoraalka ah ee aqoonta duurka, murashaxiinta;
a) Heerka aqoonta maadooyinka imtixaanka lagu sheegay ku dhawaaqista imtixaanka gelitaanka,
c) Shahaadada, awoodda matalaadda, ku habboonaanta dabeecadda iyo falcelinta shaqada,
ç) isku kalsoonaan, qancin iyo qancin
t) Tayada guud iyo dhaqanka guud,
c) Waxaa lagu qiimeyn doonaa marka loo eego furfurnaanta horumarka sayniska iyo teknolojiyada.
(6) Si loogu guuleysto natiijada imtixaannada qoraalka iyo afka ah; murashaxu waa inuu lahaadaa ugu yaraan 70 dhibcood mid kasta oo ka mid ah imtixaannada qoraalka iyo hadalka ah. Dhibcaha celceliska celceliska laga helo imtixaanka waxaa lagu kala saari doonaa kan ugu hooseeya illaa kan ugu hooseeya tirada tirada musharixiinta ayaa loo qoondeyn doonaa illaa iyo inta tirada kootada laga bilaabayo murashaxa leh dhibcaha ugu badan. Sidaa darteed, murashax kastoo helo celcelis ahaan 70 ama ka kor looma tixgelin doono inuu yahay mid guuleysta.
(7) Haddii aysan jirin musharixiin ku filan wasaarad kasta oo qoraal ah iyo imtixaan afka ah ah, shaqaalaha harsan waa la buuxin karaa iyadoo la magacaabayo waaxyo kale oo loo arko inay ku habboon yihiin Madaxweynaha.
(8) Haddii aysan jirin musharixiin ku filan natiijada imtixaanka qoraalka ah iyo afka ah, tiro ka yar shaqaalaha ayaa la magacaabi karaa marka la sheego.
V- TAARIIKHDA SAXEEXA IYO Goob
(1) imtixaanka xulashada kahor 14:03 markay tahay 2020/10/00 waxaana lagu qaban doonaa hal kal-fadhi.
(2) magacyada murashaxiinta u qalma inay galaan imtixaanka u-qalmitaanka hore iyo goobta imtixaanka ee websaydhka rasmiga ah ee Agaasinka Isgaarsiinta (http://www.iletisim.aov.tr) ayaa lagu dhawaaqi doonaa.
(3) Murashaxiinta u go'aansaday inay kaqeybgalaan imtixaanka oo aan lagu helin inuu u qalmo imtixaanka lama aqbali doono imtixaanka gelitaanka. Tijaabada kuwa qaaday imtixaanka sidoo kale waxaa loo qaddarin doonaa inay yihiin wax aan shaqeyn.
(3) Maaddaama ay darajada tahay in lagu saleeyo natiijooyinka imtixaanka qoraalka ah, magacyada kuwa xaq u leh inay ka qeybgalaan imtixaanka qoraalka iyo taariikhda iyo goobta imtixaanka lagu shaacin doono bogga rasmiga ah ee Agaasinka Isgaarsiinta. Murashaxiinta si gaar ah looma ogeysiin doono.
VI- Aqoonsiga Aqoonsiga iyo Imtixaanaadka
(1) Musharixiinta in ay qaataan Imtixaanka imtixaanka Entry Document sawir iyo xaqiijiyey Aqoonsiga Document (photo, qabow ku tuntay iyo kaarka aqoonsiga lambarka kaarkaaga ID / Republic of Turkey kaarka aqoonsiga / kaarka Northern Cyprus Turkish ID Republic, lambarka kaarka aqoonsiga shatiga baabuur-wadidda, halka baasaboor sax ah Waa inay soo gudbiyaan Kaadh Buluug ah, sawir ah, saxeexan yihiin, shaabadaysan yihiin oo shaqaynaya Kaadhka Aqoonsiga Ku-meelgaarka ah ee ay soo saartay Agaasimaha Guud ee Arrimaha Dadka iyo Dhalashada ee kuwa ka tagaya jinsiyadda Turkiga ruqsad iyo dhaxlaashooda sharciga ah. Dukumiintiyo kale oo ansax ah ma noqon doonaan imtixaanka. Baadhitaanka dukumiintiga waxaa qaadaya imtixaan qaadayaasha kuwa haysta shahaadooyin la waayeyna looma qaadi doono imtixaanka.
(2) Ujrada ay bixiyaan codsadayaasha codsigooda loo arko mid aan ansax ahayn, oo aan ku dhicin ama ku dhacay imtixaanka, aan laga qaadin ama laga qaadin imtixaanka, ku dhacay imtixaanka ama loo arkayay mid aan ansax ahayn, kuwaas oo bixiyay khidmado ku saabsan macaamil aan u baahnayn khidmad ama kuwaas oo ku bixiyay in kabadan hal lacag bixin isla macaamil la mid ah lama soo celin doono. Masuuliyada bixinta saxda ah ee ajuurada waxaa saaran musharrixiinta.
(3) Dukumiintiyada Galitaanka Imtixaanaadka waxaa loo heli doonaa codsadayaasha Maarso 9-13, 2020 iyadoo loo marayo websaydhka Adeegyada Imtixaanka. Dukumintiga Galitaanka Imtixaanka ayaa lagu daabici karaa midab ama madow iyo caddaan. Musharixiinta waa inay hubiyaan in dhammaan meelaha dokumentiga ku yaal ay muuqdaan marka ay dukumiintiyada ka tuurayaan daabacaha. Dukumintiga waxaa kujira xarunta, dhismaha, macluumaadka hoolka iyo sawirka halka musharraxu uu imtixaanka ku galayo. Imtixaanka murashaxa ku gala imtixaanka meel kale oo aan ahayn hoolka lagu qoro dukumintiga galitaanka imtixaanka waxaa loo arkaa mid aan ansax ahayn. Musharraxu wuxuu aadi doonaa dhismaha ka hor maalinta imtixaanka si loo xaqiijiyo cinwaanka cinwaanka oo uu ugu fududaan doono murashaxa maalinta imtixaanka. Dukumintiga gelitaanka imtixaanka looma diri doono cinwaanada musharixiinta.
VII- MAGACYADA IYO CADAALADA WINNERS
Magacyada kuwa ku guuleysta Imtixaanka shahaadiga ah ama kuwa badali doona waxaa lagu shaacin doonaa mareegtada rasmiga ah ee Isgaarsiinta Madaxtooyada. Kuwa ku baasaya imtixaanka waxaa looga baahan yahay inay dalbadaan Waaxda Maareynta Adeegyada Maareynta Adeegyada Isgaarsiinta muddadan ay ku wargalinayaan Madaxtooyada.
Macluumaadka ku saabsan imtixaanka oo dhan waxaa laga heli karaa taleefanka Xarunta Isgaarsiinta ee Madaxtooyada.
Lambarka Telefoonka: (0 312) 583 58 32 - (0 312) 583 58 88
Internetka / Bogga bogga: http://www.iletisim.aov.tr
Cinwaanka: Agaasimaha Isgaarsiinta Adeegyada Dheeraadka ah ee Adeegyada Maareynta Dhismaha Waaxda Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No: 119 Balgat / ANKARA
Soo iibsiga Khabiirka Isgaarsiinta Kaaliyaha